Beesha Caalamka oo cadeysay mowqifkeeda ku aadan dhismaha HirShabelle (AQRI) - Caasimada Online
Home Warar Beesha Caalamka oo cadeysay mowqifkeeda ku aadan dhismaha HirShabelle (AQRI)
Beesha Caalamka oo cadeysay mowqifkeeda ku aadan dhismaha HirShabelle (AQRI)
Nairobi (Caasimada Online)-Qaramada Midoobay, Hawl-galka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM, Midowga Yurub, Ururka IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden iyo Britain ayaa soo dhaweeyay sida guusha leh ee uu kusoo dhammaaday Geeddi-socodkii maamul u samaynta Hir-Shabelle ee dhawaan la sameeyay, Waxaana u hambalyeeyeen Madaxweyne Cali C/llaahi Cosoble iyo Madaxweyne Kuxigeen Cali Cabdullaahi Xuseen oo iyagu qaaday mas’uuliyaddaas culus.
Sidoo kale, Saaxiibada caalamku waxay maamulka HirShabelle ku dhiirri-geliyeen inay la hadlaan kooxihii aan ka-qaybqaadanin geedi-socodka maamul samaynta, lana xaqiijiyo ilaalinta masaalixda dhamaan beelaha deegaanka.
Tani waa in lagu xisaabtamaa marka laga Qayb-qaadanayo Geeddi-socodka Doorashada oo si loo wada dhan yahay loo helo metelaadda labada aqal.
Dib u heshiisiin laga hirgeliyo dhamaan deegaanada HirShabelle ayaa muhiim u ah marxaladda hadda lagu jiro.
Saaxiibada Caalamku, waxay ku Boorriyeen Madaxda Cusub ee Hir-Shabelle inay hadda diiradda saaraan geedi-socodka doorasho ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya. Maamulka cusub wuxuu haystaa fursad uu ku muujiyo hogaamin isagoo u hogaansamaya xeerarka iyo habraacyada ay isla meel dhigeen madaxda Madasha Hogaanka Qaran.
Saaxiibada caalamku waxay sidoo kale ugu baaqeen madaxda Maamulka inay xaqiijiyaan in ugu yaraan 30% kuraasta loo qoondeeyay HirShabelle ee labada aqal, Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose ee Baarlamaanka loo qoondeeyo oo loo daayo haweenka.
Ugu dambeyn, Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Michael Keating – ayaa yiri; “Beesha Caalamku Waxay diyaar u tahay inay Taageerto Maamulka Cusub oo isagu ku hawlan ajenda u samaynta muwaadiniintiisa iyo horumarinta hay’adaha dowladeed si uu wax uga qabto baahida muwaadiniintiisa.”